IPhone waa hanti ahaan kibir ah sababtoo ah waxay ka dhigtaa nolosha fudud leh iyo barnaamijyadooda badan oo ay. Marka batteriga bilaabo simaha cajiib ah, si kastaba ha ahaatee, waxaa la gaaray waqtigii inay talaabo ka qaado ka hor tagaa gabi ahaanba dhintay. Dadka la kulmaan arrimo kala duwan oo ay la socdaan beytari iPhone. Waa arrin dabiici ah in mid ka filan batari iPhone ay u waarto; laakiin sida qalab digital oo dhan, iPhone u baahan yahay dayactir qaar ka mid ah. Dhaqmaan A fudud, hase ahaatee, waxaa laga yaabaa in lagu xalliyo dhibaatooyinka taasoo keentay in nolosha batari gaabiyey.
Apps lagu sii daayo waqtiga oo dhan, iyo inta badan waa sasabasho ku filan oo ay ku shuban on inay iPhone. Qaar ka mid ah batteriga ka badan kuwa kale daadi. Sida caadiga ah, waxaa dhaanta inay tababar iPhone si ay dib ugu sarreysa xaalad aad u hesho adigoo buuxinaya hawlaha fudud.
Maqaalkani waxa uu daboolayaa 2 qaybood sidii aad dib iPhone batari inaad xaalad wanaagsan:
Qaybta 1. Sida loo iiraacshay iPhone Battery
Qaybta 2. Sida loo xoojiso iPhone Battery Life
Guddi iPhone ka soo hurudda la reboot diiran. Xaaladaha caadiga ah, akhriska ah oo muujinaya mas'uul 70% caawinaysa 2-ilaa 3 daqiiqo video duubo si sahlan, laakiin shubeyso batari ku xasil laga yaabaa in lagu qoro jir-. Waxaa jira looma baahna in argagixin. Batari xaq u baahan riixay. Marka la eego farsamada, waxa loo baahan yahay in la dhexdiisa saxnaanta. Geedi socodka waa mid fudud oo la samayn karaa si joogto ah lixdii biloodba mar ama si. Qaaddaana tallaabooyinka soo socda ee dhaqmaan.
Tallaabada 1. Charge iPhone ilaa tilmaame ayaa muujinaya buuxa. Waxa ay dhig hab oo aan waxtar lahayn oo loo hubiyo in aan isticmaalo inta lagu jiro nidaamka xukun (raadiyaan icon Apple shaashadda).
Tallaabada 2. batari iPhone wuxuu u baahan yahay jimicsi ah. Waxaa Eedayn awoodda buuxa oo markaa ka daadi batteriga ilaa tagaa dhintay ka hor inta aanay mar kale ku amraya.
Tallaabada 3. awoodda Full ka muuqan kara heerarka wax ka yar 100% ee jeer. IPhone waa badan tahay misaligned iyo waa in ay fahmaan sida ay u gaaraan heerarka asalka ah. Batteriga miir si buuxda oo ku nasto islamarkaana ugu yaraan laba jeer u natiijooyin wanaagsan.
Iyadoo qaababka badan oo la heli karo, iPhone ma soo jiidato dadka iyaga oo dhan suuragelinayo. Inta badan waxaa la dayacay muddo ka dib. Waxaa suurtagal ah in dami dhowr ah muuqaalada si loo horumariyo nolosha batteriga.
Isticmaal Vibratory Mode marka loo baahdo, waxay doortaan in ay awood hab Silent kaliya marka loo baahdo. Riix Settings iyo Sound; haddii gariirka waa karti, bedesho off. Habkaani wuxuu ku gororinaysa batteriga ilaa xad iyo dadka isticmaala si fiican off iyadoo la isticmaalayo hab buugga yihiin.
Demi Animations aan loo baahnayn: saamaynta muuqaal ah kor loogu qaado hodan aragnimo user ee iPhone. In la dhiso dheelitirka sax by go'aansaday ka mid ah batariga-dheecaan saamaynta parallax iyo animations. Si parallax off, guji Settings> General> Helitaanka. Sahlo yaree Motion ku shaqo. Si animations off, u tag Settings> Wallpapers> dhalaalka. Dooro sawir weli aan waxyeelo dhaceen. Animations ugu rarataan culaysyo macluumaadka iPhone u baahan yahay si ay u dhaqaajiso.
Hoos dhalaalka Screen: haya ee shaashada dhalaalaysa oo keliya aawadiis waxaa ka mid ah marna waa fikrad wanaagsan. Waa drainer ah batari weyn. Dheellitir baahida qofka. Riix Settings> wallpaper & dhalaalka. Ka dooro ikhtiyaarka Auto-dhalaalka Off. Nuurkii Calan gacanta si ay u gaaraan heerarka raaxada la doonayo.
Xagliyaan Buugga Downloads: CUSBOONAYSIINTA barnaamijyadooda ama music uusan raad xun nolosha batteriga. Qaar ka mid ah ayaa si dhif ah loo isticmaalo, iyo weli sii updates helo. Xagliyaan download gacanta marka aad u baahan tahay nooca ugu dambeeya. Lover music A noqon kartaa wax badan oo la xushay. Riix Settings> Lugood & App Store. Dooro Automatic Downloads Off iyo jadwalka downloads marka loo baahdo.
Dami Settings Like Siri: Siri waxaa firfircoonaan markii user ka guuro iPhone ku wajahan wajiga. Mar kasta oo app wuxuu isku dayaa inuu ogaado haddii Siri waa shid, batari la miiro. Doorasho A ammaan waa in guji Settings> General> Siri iyo kor u si la hadal off. Hab ayaa had iyo jeer ka shaqeysiin karo by hoos u haysta fure Home ah. Intaa waxaa dheer, nidaaminaya isticmaalka AirDrop, Wi-Fi, iyo Bluetooth gacanta.
Dooro Default iPhone Apps: barnaamijyadooda default waa warshad lagu rakibay oo kulan la telefoonada gaarka ah shubeyso ugu yar ee batteriga. Digtoonaanta baa loo damaano qaado, sida Chine dheeriga ah ee laga yaabo in ay leeyihiin sifooyinka la mid ah in ay barnaamijyadooda hooyo laakiin dhigay rar badan oo ku saabsan batari iPhone.
Demi Background App Refresh: tijaabin iPhone si aad u hubiso haddii Chine ayaa la cusbooneysiiyaa on auto. Riix Settings> General> Isticmaalka iyo la soco hoos jeer daaran iyo Isticmaalka. Sahlo hurdada / hab Wake iyo ku noqo Isticmaalka 10 daqiiqo ka dib. Daaran waa inay waqtiyada soo kordha. Haddii uu jiro isbedel lahayn, gool kulaad uu noqon karo app ah la cusbooneysiiyaa. Back to Settings> General Tag, oo guji Background App Refresh. Samee baaritaan deg deg ah oo ka saari barnaamijyadooda la rabin. Iyaga mar kale rakib marka loo baahdo.
Barkinta Services Location: suuragelinayo iPhone si ay ula socdaan meesha waa raaxo ah haddii aad guurayso dhulka aan la aqoon. Waxa ay daadi batteriga ku salaysan joogto ah oo laga yaabaa in aanay doorasho saxda ah ee nolosha batari la dheereeyey. Hubi on Settings> Privacy. Raadi barnaamijyadooda la rabin ama aan la isticmaalin ka yar Adeegyada Goobta iyo iyaga dami. Sidoo kale, fursadaha sida iAds Location-ku saleysan oo soo noq Goobaha la naafada ah ay ka yar yihiin Adeegyada System.
Ka dhig External Battery soo dhow dahay, baakad cusub oo batari si joogto ah lagu sii daayo suuqa taageero batari dheeraad ah. Dooro pack socon lagula talinayaa iPhone. Waxaa loo isticmaali karaa waxyaabaha kale ee digital u baahan taageero batteriga. Size marnaba wax dhibaato ah, sida saarayaasha cusub la yimaadaan fikrado weyn inay qariyaan maala.
> Resource > iPhone > 10 Nasteexo celi iPhone Battery in Hayso Waxaa xaalad wanaagsan